Kaabta 6. Samsung Cloud
Maalmahan, dad badan leedahay casriga ah Samsung oo waxaa ka buuxa oo dhan xogta muhiim ah in u dhaxeysa ballamaha maalin iyo jadwalka si sawirro shakhsiga ah iyo filimada. Waxaa la buuxiyey sawiro kuwa jecel yahay, farriimaha ka soo saaxiibada iyo macluumaadka xiriirka ee qof kasta oo aad ku garataan. Markii uu noqday sida qayb muhiim ah oo ka mid ah nolosha, waxa ay noqotay macquul ah oo keliya loo ilaalin xogta muhiimka ah. Khasaaraha Data dhici karaan sabab u tahay tirada mid ka mid ah sababaha; luma telefoonka, in waxyeelo ay ku xasuusta gudaha haddii telefoonka waxaa hoos u dhacay dabaqa ama biyo ama Dicumintiyo software ah. Waxaa jira sababo badan oo lama filaan ah oo ay gacan laga yaabaa in ay khasaare xogta. Formatting telefoonka yaabaa in loo baahdo haddii PIN ayaa la illoobay, ma jiraan fursado kale oo la heli karo si dib qalabka.
Sidaa awgeed waxaa lagama maarmaan ah in ay gurmad xifdiyo doodiisa muhiim ah oo weyn oo ka mid ah macluumaadka waa in la joogo in qalabka our. Dad badan oo Samsung gurmad software ka jira si looga hortago khasaaro xogta sida iyo si loo hubiyo in macluumaadka ammaanka iyo nabad ah. In this article qiimeyn doonaa qaar ka mid ah ugu wanaagsan ee 10 software la heli karo iyo app oo waafajinta karo iyo badbaadin xogta.
Qaybta 1. Top 5 Samsung ee kaabta Software Qaybta 2. Top 5 Samsung ee kaabta Apps
Qaybta 1. Top 5 Samsung ee kaabta Software
2. Samsunug Auto kaabta Free Win
3. PC Auto kaabta Free Win & Mac
Samsung Kies , software-ka ee ay Samsung oo u ogolaanaya syncing effortless badan Wi-Fi ee qalabka Samsung dambeeyay. Waxa ay u ogolaataa howlan xiriirada ka Outlook, Yahoo iyo Gmail. Added in ka shaqeynayaan ee howlan yahay xaqiiqda ah in uu wargeliyo user marka update firmware ah ayaa la sii daayay, waayo, casriga ah. Waxa kale oo kuu ogolaanaya in abuurista playlists music oo la synced laga yaabaa inuu casriga ah leh oo kaliya click ee badhan. Feature oo dheeraad ah ayaa sidoo kale u ogolaanaya dadka isticmaala si ay u abuuraan podcasts oo kaydi telefoonka.
Software ayaa waxaa lagu taageeray labada software si weyn loo isticmaalo hawlgalka kuwaas oo Windows iyo Mac. Software waxaa marti website-ka Samsung.
Waa maxay karaankeeda gurmad
S Planner (dhacdooyin taariikheed)
Files content Kaladuwan
Macluumaad account Email
Updates qalab firmware.
Kuu ogolaanayaa kala iibsiga effortless xidhiidho, xogta qalab ay ka mid yihiin qoraalka iyo fariimaha multimedia, muusig iyo cajallado fiidyow ka badan Wi-Fi ama iyada oo cable USB ah.
Available labada Mac iyo Windows.
2. Samsung Auto kaabta
Samsung Auto kaabta waa software ah loogu talagalay oo ay Samsung in yimaado guraa la Samsung drives adag dibadda. The software kaabta Samsung Auto u ogolaanaya qorsheeyey hayaan taas oo si toos ah u shaqeeyaan iyo gurmad ka kooban yahay qalab aad. Hayaan ayaa la dhawray karaan SafetyKey ah (qiyaas ilaalinta password) si ay u bixiyaan ilaalinta indhaha wax bandanna. Utility ayaa kaabta ayaa sidoo kale la siiyaa feature sirta ah oo la shaqeeya ayaa laga yaabaa in aad hesho ammaanka ugu badan. Geedi socodka dib u soo celinta waa wax fudud oo effortless. Utility ayaa loo sameeyey Windows Operating System oo u ogolaanaya taageero kaliya ee Samsung External Hard kaxeeya.
Waa maxay karaankeeda gurmad:
Dhammaan kordhin file
Kuu ogolaanayaa kala iibsiga effortless xogta disk adag oo ay ku jiraan waraaqaha, muusig iyo cajallado fiidyow.
Kuu ogolaanayaa sirta ah gurmad ah.
Kuu ogolaanayaa jadwalka si toos ah hayaan.
Ma heli karo Mac.
3. PC Auto kaabta:
PC Auto kaabta , software dhisay-in loogu talagalay by Samsung u taxanaha Samsung Smart Camera ka mid yihiin Camera Galaxy. Software wuxuu kuu ogol yahay kala iibsiga wireless ah sawiro iyo videos. Waxaad u baahan tahay oo kaliya in ay dejiyaan software ah hal mar iyo u daryeeli doona inta ka dhiman. Hayaan wuxuu dhici doonaa si joogto ah iyo u ogolaan doona nabadda ee maskaxda si user ah halka la tirtiro sawiro ka Camera ah. Wixii software ah si wax ku ool u shaqeeyaan, labadaba camera iyo laptop waa in shabagga ku WiFi isku mid ah. Utility ayaa la dhisay-in muuqan shaqaysaa labada Mac iyo Windows.
Maxaa raad raac:
Hayaan joogtada ah ee sawiro iyo videos iyada oo Wi-Fi.
Wondershare MobileGo for Android ama Wondershare MobileGo for Android Pro (Mac), software-ka casriga ah maaraynta kaas oo u ogolaanaya in ay taageerto kor u joogay oo dhan ka kooban qalabka Samsung ah wirelessly ama la cable USB ah. Marka laga reebo qalab kuwaas waxaa kale oo uu leeyahay qaar ka mid ah qalab dheeraad ah sida, ka jawaabidda iyo qoraallada ka desktop-ka, download barnaamijyadooda ka Google Play iyo in ka badan. Waxaa laga heli karaa lacag la'aan ah muddo maxkamad 15 maalin. Haddii aad rabtid in aad sii waddo isticmaalkooda this software, Times hal sano laga iibsan karaa $19.95 iyo liisanka ee Meyeydaan wax laga iibsan karaa $39.95 halkan.
Apps iyo xogta app
Kaabta ku dhowaad dhammaan xogta ku saabsan Samsung telefoonka ama kiniin.
1 click gurmad, si aad u degdeg ah oo waayi maayo.
Chine Download, music, video ka Google Play, YouTube, Wontube iyo websites ka badan.
All-in-mid Samsung maamulka xogta.
MoboRobo , software ah maaraynta smartphone u ogolaanaya maamulka wax ku ool ah ee qalabka macruufka iyo Android. Waa mid ka mid ah software madal iskutallaabta ugu horeysay oo waxay u saamaxdaa wareejinta xidhiidhka ka dhexeeya iPhone iyo Android hoos dadaalka loogu baahan yahay in la beddelo telefoonada. Marka laga reebo in ay u saamaxdo toos ah content download in telefoonka. Isagoo ka hadlayay ka mid ah awoodaha ay gurmad, waxa uu leeyahay oo dhan la doonayo awoodaha gurmad.
MoboRobo sameeya hayaan isla software kale u ogolaanaya sida: Xiriirada, fariimaha, abuse wac, files warbaahinta, waraaqaha iyo xogta app. Software wuxuu u baahan yahay hab debugging si loo leexanayo iyo ikhtiyaarka u rakibidda barnaamijyadooda ka il kale oo aan ahayn Store Play. Doorashadan waxa laga heli karaa telefoonka ee goobaha Security. MoboRobo ayaa sidoo kale noqon kara tababaraha file aad telefoonka ah, kuu oggolaadaan in aad si toos ah u beddeli ku jira qalab ee. MoboRobo software waxaa hadda taageeray on Windows xitaa kaliya, inkastoo ay u saamaxdo maamulka iPhone iyo sidoo
Codsiyada lagu rakibay qalabka
Waxaa ka mid ah maamulka iPhone.
Kuu ogolaanayaa iPhone in Android xiriirada kala iibsiga iyo qeybsanaan ku xigeenka.
Kuu ogolaanayaa rakibidda codsiyada.
La shaqeeyaa dhammaan taleefanada Android.
Software aan weli si fiican u aqoonsan yahay.
Qaybta 2. Top 5 Samsung ee kaabta Apps
Waxaa jira wax badan oo Chine on nidaamka qalliinka Android kaasoo u ogolaanaya gurmad gudaha ee telefoonka. Gurmad ayaa laga yaabaa markaas in lagu kaydiyaa gudaha telefoonka ama internetka ee kaydinta daruur. Chine ayaa laga yaabaa in ama aan u baahnayn waxaa laga yaabaa in feature xidid on casriga ah. Root u ogolaanaya muuqaalada gurmad dheeraad ah si user ah. In article soo socda aan ka hadli doonaan caadi ahaan loo isticmaalo barnaamijyadooda gurmad. Waxa kale oo aanu ku siin doonaa Play Store xiriir toos ah, si loo yareeyo habka dajinta.
Helium 4.5 Free & Premium ($ 4.99) versions. Labada xidid iyo non-rujin.
Kaabta G Cloud 4.6 Free Labada xidid iyo non-rujin.
MyBackup 4.6 Free & Premium ($ 4.99) versions. Versions gaar ah xidid iyo non-rujin.
Kaabta Titanium 4.8 Free & Premium ($ 6.58) versions Kaliya geelaa
Kaabta Super 4.4 Free & Premium ($ 1.99) versions. Labada xidid iyo non-rujin.
Helium, software-ka ee ay soo khabiir android caan ah oo sameeysa, Koushik Dutta u ogolaataa user ay u balan hayaan. Hayaan ayaa waxaa ka mid ma aha oo kaliya xogta user sida sawirada iyo xiriirada, laakiin sidoo kale waxaa ka mid ah codsiyada in loo xiraa qalabka. Hayaan ayaa laga yaabaa markaas in la badbaadiyey on kaydinta gudaha ee qalabka. Version ayaa premium codsiga ogol syncing effortless ah gurmad ay u daruur kaydinta online. Codsiga waxaa si fiican u shaqaynayaan iyada oo labada qalabka xidid iyo non-rujin.
Download Helium ka Google Play Store >>
Download Helium Premium License ka Google Play Store >>
Kaabta 2. G Cloud
G kaabta Cloud, ee ay soo Genie9, waa lacag la'aan ah si ay u soo bixi codsiga in la iman awoodda ay si xor ah u badbaadin hayaan ee ku sugan servers kaydinta daruur. Codsiga waxaa ka mid ah 1GB ee kaydinta daruur oo la kordhin karaan gudbinta dhex Twitter ilaa 8GB. Waxa kale oo aad ka iibsan kartaa kaydinta dheeraad ah, $ 32 kaydinta 32GB dhacday inay sannad dhan. Codsiga waxaa ka badbaadiyay dhammaan dadka ay khuseyso, abuse wac, fariimaha iyo content warbaahinta la joogo qalabka. Codsiga waxaa si fiican u shaqaynayaan iyada oo labada qalabka xidid iyo non-rujin.
Download G Cloud ee kaabta ka Google Play Store >>
Soo diyaariyay Rerware, LLC waa codsi Android jidaynayey fudud loo qorsheeyey adeegga gurmad; laga heli karaa labada versions Free Premium iyo. Codsiga waxaa u ogolaanaya inuu taageero ka kooban dhammaan goobaha in la joogo qalabka ay ka mid yihiin xafididda ah APNs, Shabaqa Home (oo ay ku jiraan tuuryo la jagooyinka ay), entries Calendar, entries Dictionary iyo Bookmarks waxyaabo ay ka mid yihiin. Codsiga waxaa sidoo kale feature ah u haajiraan oo u ogolaataa user ay u wareejiso content iyo dhaqaajiso saldhigyo mid phone in kale. A version xidid gaar ah codsiga waxaa kaloo laga heli kaas oo bixiya siyaada ah sida
Hakinta barnaamijyadooda Bloatware iyo System
Banaanka khasnado iyo Data codsiyada
Xogta iyo hayaan codsiga laga yaabaa sidoo kale waxaa laga daawan online by boonooyinka joogo Web daawadayaasha on goobta marti sameeysa codsiga ($ 4.99)
Download MyBackup ka Google Play Store >>
Download MyBackup Pro ka Google Play Store >>
Kaabta 4. Titanium
Kaabta Titanium, ee ay soo Titanium Track, codsiga waa heli kara oo keliya dadka isticmaala rujin ee casriga ah. Codsiga waxaa u ogolaanaya inay taageerto kor u gebi ahaanba la joogo content ee casriga ah. Ilaa codsiyada waxaa lagu taageeray karaa hab kooxeed oo dib loo soo celiyo. Codsiga waxaa kasoo muuqday dhamaan qalabka gurmad in waxa bixiya barnaamijyadooda badan android ah. Features ka mid ah:
Hagaagsan xogta si storages daruur caadiga ah sida Google Drive iyo DropBox.
Sirta ah gurmad ah
Codsiga Individual celin ka hayaan Recovery caadi ah
Si aad u rakibto version joogtada ah ee caymiska, rakibi kaabta Titanium ka dibna loo soo dajiyo ee kaabta Titanium Key Pro kaas oo ka yimaadaa la qiimaheeda $6.58 ah
Download kaabta Titanium ka Google Play Store >>
Download Titanium kaabta Pro ka Google Play Store >>
5. Super kaabta
Kaabta Super, codsi ay diyaariyeen Studio Idea Mobile waa mid fudud oo ah in la isticmaalo codsiga u qabata hawlo weyn oo adag. Waxay abuurtaa gurmad ah oo ka mid ah entries xiriirada, fariimaha, abuse wac, app iyo jadwalka. Hayaan ayaa lagu qaban karaa sidoo kale. Codsiga waxaa si fiican u shaqaynayaan iyada oo labada qalabka xidid iyo non-rujin.
Version ayaa lacag la'aan ah ayaa xayeysiis, inuu iyaga ka dhaqaajiyo aad u baahan tahay si ay u iibsadaan Super kaabta Pro oo kharash $1.99 on Google Play Store.
Download Super kaabta ka Google Play Store >>
Download Super kaabta Pro ka Google Play Store >>
Demi Faylal ay ka Samsung si iPhone
Photos Transfer / Video ka iPad in Samsung
> Resource > Android > Top 10 Samsung Software ee kaabta iyo Apps Waxaad u